बिरामीप्रति सम्बेदनशील बनौं - खोजतलास
साथीहरु कोरोनाका कारण भएको लकडाउनमा पशुपतिमा लास नै कम गएछन् । अस्पतालमा पनि बिरामी कम भएछन् । यसको पछाडिको एउटा कारण यो पनि रहेछ की विरामीहरु डाक्टर कहाँ कम गएछन् । डाक्टर केबल रोग निको पार्ने मात्र होइन छिटो परमधाम पु¥याउने कारण पनि हुन सक्दा रहेछन् किनकी डाक्टर कहाँ गएपछि औषधि पाइन्छ र औषधिले शरीरमा प्रशस्त साइड इफÞेक्ट गर्दो रहेछ ।
खरेल सा’बको शासन र माओबादी कालमा म एकबाट अर्को माओबादी स्थानमा सरुवा भइरहेको थिएँ । पथलैयाबाट बर्दीया र बर्दीयाबाट सुर्खेत पुगिरहेको थिएँ । मेरो पेट एकदम पोल्ने र मुटु छिटो छिटो चल्ने भइरहेको थियो । बर्दीयामा रहँदा एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा मेरो पुरा हात काम्यो । मैले मलाई के भइरहेछ भन्ने बुझिरहेको थिइन र प्रहरी अस्पतालमा जाँचका लागी आउन अनुरोध गर्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयले मलाई काठमाडौं आउने अनुमती दिएन । मलाई स्थानीय डाक्टरहरुले पेट र इन्फेक्सनको बिभिन्न औषधि दिइरहेका थिए र म निक्कै दुब्लाउँदै गै रहेको थिएँ ।
काठमाडौं आउन नपाए पछि म सुर्खेतबाट लखनउ गए र त्यहाँ एक फिजिसिएनसन्ग सम्पर्क गरेँ । ती डाक्टरले मैले खाँदै गरेका औषधिहरु हेरे र भने ‘तपाइलाई जरुरी नभएका औषधिहरु धेरै खुवाइएका रहेछन् । मलाइ घाँटीको ग्रन्थी थाइराएडको शंका छ । उनले मेरो रगत र अन्य जाँच गरे र मेरो थाइराएड फङ्सनमा गढ़बड़ी देखियो । उनले भने तपाईसँग दुईवटा बिकल्प छन् पहिलो यसलाई औषधिले नियन्त्रणमा राख्ने, देश्रो रेडियो आयोडिन दिएर थाइराएड ग्लैण्ड नष्ट गरी शरीरलाई चाहिने थाइराएड ग्लैण्डले बनाउने हार्मोन मुखबाट खाने । मलाई सोधियो तपाइँ एक छान्नु होस् ।
मैले निर्णय गर्न सकिन र सुर्खेत फर्किएँ । मैले सल्लाह लिन सक्ने कोही थिएनन् र लडाइमा रहेकोले म सुर्खेत छोड्न सक्थिन । काठमाडौं आउने अनुमती पाउथिन मेरो समस्याअरु बढ्दै थियो त्यत्तिकैमा दुनै काण्ड घट्यो र खरेल सा’बको स्थानमा प्रदीप शंसेर राणा सर आईजीपी हुनुभयो । उहाँलाई बधाई दिँदै मैले आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा बताएँ र उहाँले तत्कालै फÞोनबाटै काठमाडौं आउन अनुमती दिनु भयो । म काठमाडौं आए र उहाँले मेरो अबस्था देखेर चिन्ता नै गर्नुभयो । म चार दिन बिदा लिएर दिल्लीको एपोलो अस्पताल गएँ र त्यहाँ मलाई फेरि औषधि र ग्लैण्ड नै नष्ट गर्ने बिकल्प दिइयो । औषधिमा बसौं नेपालमा बारम्बार थाइराएड जाँच्नुपर्ने र त्यस विषयका डाक्टर थिएनन् । मैले डाक्टरलाई आफू लडाइको स्थलमा सरुवा रहेको बताएँ । उनले मलाई ग्लैण्ड नष्ट गर्ने सल्लाह दिनु भयो । मैले माने ।
त्यो ग्लैण्ड नष्ट भए पछि मलाई संधै औषधि खानुपर्ने भयो र अनेकौंँ नयाँनयाँ समस्या देखिन थाल्यो । पछि धेरै डाक्टरहरुले भन्न थाले कि ग्लैण्ड पुरा नष्ट गर्नु पर्थेन । मैले डाक्टरले यस्तो किन गर्नु भयो त भन्दा उहाँहरुले भने ‘कीनकी यसमा बड़ी रकÞम आँउदछ । डाक्टर र प्राइभेट अस्पतालको एउटा उद्देस्य यो पनि हुन्छ कि बिरामीबाट पैसा बढ़ी आओस् र बीरामीलाई संधै सम्पर्कमा आइरहन परोस् ।
प्रहरीहरु बिरामी हुँदा प्रहरी अस्पताल आउन चाहान्छन् तर मैले बिगतमा यो पनि देखें कि प्रहरी अस्पतालले आईजीपी कहाँ सोध्न जाने र यदि आईजीपीलाई मन नपरेका प्रहरी कर्मचारीहरु भए प्रहरी अस्पतालमा आउनै नदिने पनि गरिन्थ्यो । कतिपय अफिसर आफु चाहिँ थोरै काममा संकट परेका पनि बेहोस् भई आफू चाहिँ अस्पतालमा महिनौ बसी संकट शान्त भएपछि मात्र अस्पतालबाट काज फिर्ता हुने पनि थिए ।
जब म एसएसपी भएर प्रदीप शंसेर राणा सरको पी.ए. भए मैले बाहिरबाट बिरामी भएर काजमा आउन चाहनेहरुको संबेदनसिल भएर स्वीकृति दिलाउँथेँ किनकी मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेर बिरामीहरुको जीबनमा गर्ने खेलबाड आफैले भोगेको थिएँ ।
ती बिगतका कुराहरु यस प्रसँगमा आएका हुन् कि समयमा र सही सल्लाह नपाउँदा स्वास्थमा गंभीर समस्याहरु आउन सक्छन् अतः जो कोही पनि बिरामी हुँदा केबल एक डाक्टरसँग मात्र सल्लाह नगरी केही डाक्टरहरुको राय सुनेर मात्र निर्णयमा जाँदा राम्रो हुने रहेछ ।
धेरै हामीलाई डाइबीटीज (सुगर रोग) छ । सुगरमा टाइप ए मा पेन्क्रियाजले इन्सुलीन नै ननिकाल्ने हुँदा हामीले इन्सुलीन लिनुपर्ने हुन्छ । तर टाइप टु मा इन्सुलीन कम वा बड़ी निस्की रहेको पनि हुन सक्छ । टाइप टु मा हामीलाई पहिला ट्याबलेटहरु र पछि इन्सुलीन दिइन्छ । ती औषधिले क्रमशः हाम्रो मुटु, आँखा र किड्नीलाई ड्यामेज गर्दै जान्छ । तर के हामीले हाम्रो डाक्टर सा’बलाई पहिला यो कुरा सोधेका छौं कि ‘मेरो शरीरलाई चाहिने इन्सुलीन कति हो ? मेरो पेन्क्रियाजले कति इन्सुलीन निकाली रहेको छ ? यो कुरा एकिन नभई कुन आधारमा औषधिको मात्रा तय गर्ने त ?
हुँदो रहेछ के भने धेरै पेन्क्रियाजले इन्सुलीननै बढ़ी निकाली रहेको पनि हँुदो रहेछ र त्यसमाथि हामी झन् इन्सुलीन थपेर वा पेन्क्रियाजलाई झन् एक्टिभ बनाई थप इन्सुलीन निकाल्न ट्याबलेट खाइरहेको पनि हुँदा रहेछौं । यस अबस्थामा शरीर अरु खतम् हुँदो रहेछ र हाम्रो किडनी, मुटु, आँखामा थप समस्या आउँदो रहेछ ।
कृपयाँ यदि सुगर रोग छ भने साथीहरुले पहिलो कुरो यो थाहा पाउनु होला की तपाइँको आफ्नो इन्सुलीन उत्पादन कति छ ? एक दिनलाई कुनै औषधि नलिइ फोटोमा रहेको डाइबिटिजसँग संबन्धित जाँच गर्नु होला । मैले यस बिषयमा सल्लाह दिनेलाई सोधेको थिएँ डाइबीटीजमा पहिला डाक्टर सा’बहरुले औषधि दिनु अघि बिरामीको इन्सुलीन उत्पादन मात्रा किन जाँच गर्नुहुँदैन ? उनले भने डाक्टरको पनि यही इच्छा हुन्छ कि बिरामीलाई आफु कहाँ आउन परिरहोस् ।
साथीहरु यदि डाइबीटीज छ भने फोटोमा भएको कुराहरु जाँच गरौं । यसमा पहेँलो हाइलाइट गरेको इन्सुलिन एमएल चाँही अबश्य थाहा पाउँ । यो जाँच पछि थाहा हुँदो रहेछ की मैले लिईरहेको औषधि ठिक बेठिक बढ़ी घटी के छ ? प्रायः यो जाँच डाक्टरहरुले गरेको देखिँदैन । यो जाँच लाजिम्पाटको मुल सडक (पूर्ब पट्टी) पहिला टोयोटाको कार्यालय रहेको (¥याडिसन होटल नजिक) सूर्य हेल्थ केयर भन्नेमा राम्रै हुँदो रहेछ । एक पटक आफ्नो डाक्टर आफै बनी यो जाँच गराउनु होस् र थप सहयोग चाहिए मलाई फÞोन गर्नुहोस् । रोगका बारेमा आफै पनि सचेत हुनु पर्ने रहेछ ।
अर्को कुरा प्रहरी अस्पताल र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि बुझ्नु पर्दछ कि सबै बिरामी ठग्नैका लागी वा समस्या आउँदा लुक्नका लागी वा भएका आईजीपी हटाउने षड्यन्त्र गर्नका लागि मात्र प्रहरी अस्पताल आउन खोजेका हुदैनन् बल्की बास्तबमै स्वास्थ्य समस्या भएरै आएका पनि हुन सक्छन् ।
कृपयाँ सही बिरामी प्रहरीहरुलाई अस्पताल काज आउनबाट नरोक्नु होला । तपाई ठुलाहरु बिरामी हुन्दाका झै डाक्टरको समुह तल्ला कर्मचारीको घरमा चाकडी र उपचार दुबै गर्न जाँदैनन् । त्यसो भएपनि अस्पताल त आउन दिनु होस् ।
साथीहरु स्वास्थ्यप्रति आफ्ना लागी मात्र होइन अरुका लागी पनि संबेदनसील बनौं । कोरोनाबाट बचौं र बचाऔं ।
2020 August 13 11:17 am